အိမ်ထောင်သက် (၇)နှစ်ပြည့်နေ့လေးမှာ လုံးဝတန်ဖိုးဖြတ်မရနိုင်တဲ့ လက်ဆောင်တွေ အပြန်အလှန်ပေးခဲ့တဲ့ လင်းလင်းနဲ့ချစ်သုဝေ – Cele Snap
အိမ်ထောင်သက် (၇)နှစ်ပြည့်နေ့လေးမှာ လုံးဝတန်ဖိုးဖြတ်မရနိုင်တဲ့ လက်ဆောင်တွေ အပြန်အလှန်ပေးခဲ့တဲ့ လင်းလင်းနဲ့ချစ်သုဝေ
January 30, 2021 By Ju Ry Celebrity
ဂီတလောကရဲ့ တောက်ပတဲ့ ကြယ်ပွင့်နှစ်ပွင့်ဖြစ်ကြတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ကတော့ စိတ်တူကိုယ်တူရှိပြီး စွယ်တော်ရွယ်လို အချစ်ချင်းထပ်တူကျတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂၀၁၄) ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးအမြွှာလေးတွေဖြစ်တဲ့ ခေတ်နဲ့သစ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဇန်နဝါရီလ (၃၀) ရက်နေ့ကတော့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သက် (၇) နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့လေးဖြစ်ပြီး ချစ်သုဝေက သူမတို့ရဲ့ Anniversary နေ့မှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ လက်ဆောင်တွေ အပြန်အလှန်ပေးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“7th year anniversary 💛 ကိုယ့်ရွေးချယ်မှူမှတဆင့် ရရှိခဲ့တဲ့ကောင်းချီးလေးများနှင့် ဖေ့ကို “လက်ဆောင်?? “ဆိုတော့ kissတဲ့😁🤣မေရောဘာပေးမှာတုန်းဆိုတော့..”ပေးထားတယ်လေ အဲ့မှာတသက်စာလို့ ” boss ၂ယောက်ကို လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်။ အောင်မလေး လင်မယား၂ယောက် အကုန်အကျတွေများပြီး ro နေလိုက်တာများ🤣🤣🤣 အဲ့ဒါနဲ့ fbပေါ် တက်ကြွားရတော့တာပဲ..တက်သာကြွားရတာ ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ‘kiss’တောင်ရသေးတာမဟုတ်ဘူး😁…အဟေးဟေး မိန်းမထုကြီး ကျုပ်ကို အရမ်းတွေအားကျသွားကြပြီမဟုတ်လား???😁😁😁😁😁ကျေနပ်တယ်..ဂွပ်😎” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။
လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ ဘဝကို ပကာသနကင်းကင်းနေထိုင်တတ်သူတွေဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေကိုသာ လွှမ်းခြုံထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ရိုးရှင်းလွန်းတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ ဇနီးမောင်နှံကို အားကျနေကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက္ပါတယ်နော်။
ဂီတလောကရဲ့ တောကျပတဲ့ ကွယျပှငျ့နှဈပှငျ့ဖွဈကွတဲ့ လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝတေို့ကတော့ စိတျတူကိုယျတူရှိပွီး စှယျတျောရှယျလို အခဈြခငျြးထပျတူကတြဲ့ ဇနီးမောငျနှံတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။ (၂၀၁၄) ခုနှဈမှာ လကျထပျခဲ့ကွတဲ့ လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝကေ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးအမွှာလေးတှဖွေဈတဲ့ ခတျေနဲ့သဈတို့ကို ပိုငျဆိုငျထားခဲ့ပွီဖွဈပွီး သာယာပြျောရှငျတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို တညျဆောကျနိုငျခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီကနေ့ ဇနျနဝါရီလ (၃၀) ရကျနကေ့တော့ လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝတေို့ရဲ့ အိမျထောငျသကျ (၇) နှဈပွညျ့တဲ့နလေ့ေးဖွဈပွီး ခဈြသုဝကေ သူမတို့ရဲ့ Anniversary နမှေ့ာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ တနျဖိုးမဖွတျနိုငျတဲ့ လကျဆောငျတှေ အပွနျအလှနျပေးဖွဈခဲ့ကွောငျး အခုလိုပဲ ပွောပွလာပါတယျ။
“7th year anniversary 💛 ကိုယျ့ရှေးခယျြမှူမှတဆငျ့ ရရှိခဲ့တဲ့ကောငျးခြီးလေးမြားနှငျ့ ဖကေို့ “လကျဆောငျ?? “ဆိုတော့ kissတဲ့😁🤣မရေောဘာပေးမှာတုနျးဆိုတော့..”ပေးထားတယျလေ အဲ့မှာတသကျစာလို့ ” boss ၂ယောကျကို လကျညှိုးထိုးပွလိုကျပါတယျ။ အောငျမလေး လငျမယား၂ယောကျ အကုနျအကတြှမြေားပွီး ro နလေိုကျတာမြား🤣🤣🤣 အဲ့ဒါနဲ့ fbပျေါ တကျကွှားရတော့တာပဲ..တကျသာကွှားရတာ ပေးမယျဆိုတဲ့ ‘kiss’တောငျရသေးတာမဟုတျဘူး😁…အဟေးဟေး မိနျးမထုကွီး ကြုပျကို အရမျးတှအေားကသြှားကွပွီမဟုတျလား???😁😁😁😁😁ကနြေပျတယျ..ဂှပျ😎” ဆိုပွီး ပွောလာပါတယျ။
လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝတေို့ ဇနီးမောငျနှံကတော့ ဘဝကို ပကာသနကငျးကငျးနထေိုငျတတျသူတှဖွေဈပွီး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ စဈမှနျတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေိုသာ လှမျးခွုံထားတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးလညျး ရိုးရှငျးလှနျးတဲ့ လငျးလငျးနဲ့ ခဈြသုဝတေို့ ဇနီးမောငျနှံကို အားကနြကွေမယျ ထငျပါတယျနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုက်ပါတယျနျော။
အဝေးမှာရောက်ရှိနေတာကြောင့် ချစ်ဇနီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းကို မျက်ခြေမပျက်စောင့်ကြည့်အားပေးနေတဲ့ ခင်ပွန်းကြောင့် ကြည်နူးနေရတဲ့ အိမ့်ချစ်
Fan တစ်ချိူ့ ကသူမရဲ့ မွေးနေ့ရက်ကို သေရာပါအောင် တတ်တူးထိုးထားတာတွေ့ခဲ့ ရလို့ ပျော်ရွှင်မဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ယွန်းယွန်း